Air France - Airline tickets 4.1.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.1.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး Air France - Airline tickets
Air France - Airline tickets ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခရီးသွားလက်ထောက်အဖြစ်ပြင်သစ်လေကြောင်း app ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ! လက်မှတ်ဝယ်ယူ, သင့်ဘော်ဒါဖြတ်သန်းရစစ်မှန်သောအချိန်အတွက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန်များစစ်ဆေး, သင့်ပျံ Blue အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲ ... သင်က app ထဲတွင်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပွုနိုငျ!
app ကိုဖွင့်သတင်းစာကျွေးခြင်းတွင်, သင်ခရီးရဲ့နောက်ခြေလှမ်းအတွက်လိုအပ်သမျှကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်: ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်, အချိန်များသတင်းဆောင်းပါးတွေ In-စစ်ဆေးနှင့်ပင်ဘာရာသီဥတုရဲ့သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာမှာကဲ့သို့အထွက်ရှာတွေ့ ...
ဒီနေရာတွင်ပြင်သစ်လေကြောင်း app ကို အသုံးပြု. လုပျနိုငျအရာအားလုံးရဲ့:
ခရက်ဒစ် / ငွေကြိုကဒ်သို့မဟုတ်အခြားလုံခြုံငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့လက်မှတ်ဝယ်ယူပါ။
သင်ပင်အစားကို manually သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဝင်ရောက်သင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်သည်!
စဉ်းစားရန်အချိန်လိုအပ်ပါသလား? အဘယ်သူမျှမပိုတာဝန်ခံမှာ, သင့်ငွေပေးချေမှုပြီးစီးရန် 24 နာရီအထိကြာ။
သင်၏ပျဉ် PASS, GET
အတွက် Check, သင့်ထိုင်ခုံကိုရွေးပါနှင့် app ထဲမှာတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ဘော်ဒါဖြတ်သန်းရ။
အသိပေးချက်များကိုအမှန်တကယ်အချိန်၌သင်တို့၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်မှမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုသင်သတိပေးနခွေငျး Get နှင့်စိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်အခရီးသွားလာ။
သင့် Reserve သုံးသပ်ပြီးပြုပြင်မွမ်းမံ
သငျသညျမှရရှိနိုင်သည့်ရွေးစရာများ (အိတ်ကို, ထိုင်ခုံ, "a la လှည်း" menus တွေ ... ) အရသိရသည်သင့်ရဲ့ခရီးမိမိစိတ်ကြိုက်။
သင်တို့ပြေးရသောအစီအစဉ်များမှနောက်ဆုံးမိနစ်ပြောင်းလဲမှု? သင့်ရဲ့စျေးနှုန်းကခွင့်ပြုလျှင်သင် app ကိုတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်မှစသောအပြောင်းအလဲဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ပျံသန်း Blue အကောင့် Manage
သင့်ရဲ့ Award ဆုမိုင်ချိန်ခွင်လျှာ Check တစ်ခုချီးမြှင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်း, သင့် profile ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ, သင့်ကို virtual ပျံအပြာရောင်ကဒ်ရယူ ... အားလုံးတစ်ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံမှာ!
ဒီ app ကိုလည်းတက်ဘလက်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါ! သင်သည်သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုယူဖို့အကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာသင့်ရဲ့တက်ဘလက်ပေါ်တွင်လေဆိပ်သင့်မိုဘိုင်းပေါ်မှာဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ပြင်သစ်လေကြောင်း app ကိုသင်တို့အဘို့အဲဒီမှာသင့်ရဲ့ခရီးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Air France - Airline tickets အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Air France - Airline tickets အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Air France - Airline tickets အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Air France - Airline tickets အား အခ်က္ျပပါ
apps-me စတိုး 54k 16.94M
Air France - Airline tickets ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Air France - Airline tickets အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ AIRFRANCE S.A.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/transverse/footer/edito_psc.htm
App Name: Air France - Airline tickets
Release date: 2019-09-11 16:08:48
လက်မှတ် SHA1: 6E:DD:FE:D6:53:62:28:B5:7A:1B:B7:8F:C1:31:F3:F7:29:F0:F8:09
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Bruno Chambrelent
အဖွဲ့အစည်း (O): AIR FRANCE
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Île-de-France
Air France - Airline tickets APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ